Maxkamadda Sare Ee Somaliland Oo Laba Eedaysane Dil Ku Xukuntay Kuwo Kalena Dambi U Wayday
Maxkamadda Sare Ee Somaliland Oo Laba Eedaysane Dil Ku Xukuntay Kuwo Kalena Dambi U Wayday
Sunday September 22, 2013 - 13:11:56 in by geeska afrika
BerBera(BNA) Guddida Cadaalada Somaliland ayaa shalay Xukuno Dil iyo xabsi ka sii deyn isugu jira ka fulisay Maxkamada Gobolka Saaxil ee Magaalada Berbera. Dhegeysiga
BerBera(BNA) Guddida Cadaalada Somaliland ayaa shalay Xukuno Dil iyo xabsi ka sii deyn isugu jira ka fulisay Maxkamada Gobolka Saaxil ee Magaalada Berbera. Dhegeysiga dacwadahan, oo uu hormuud ka ahaa Guddoomiyaha Maxamed Sare ee Somaliland Yuusuf Ismaaciil Cali.ayaa xukuno Dil ah lagu riday laba Eedeysano oo sida uu sheegay Guddoomiyuhu ay ku cadaadeen, Kiisas Dil ah oo ay ka geysteen Gobolka Saaxil.
labada eedeysano ayaa mid ka mid ah magaciisa lagu sheegay Axmed Yuusuf Siciid oo dhawaan Tooray ku dilay nin kale oo dhintay. Sidoo kale eedeysanaha kale ee dilka lagu xukumay ayaa la sheegay inuu dilay marxuum Magaciisa lagu sheegay Maxamed Axmed, sida uu Guddoomiye Yuusuf Ismaaciil Cali fadhiga dhegeysiga dacwadaasi kaga dhawaaqay. Labada Eedeysane ee waxba lagu waayay ayaanay maxkamaddu magacaabin, balse sida aanu ka helnay ilo wareedyo ka ag dhaw guddida cadaaladda wax cadeymo ah lagu waayay ka dib markii Kiisaskooda lagu dhegeystay marxalado kala duwan oo Maxkamaddeed. Xukunka Maxkamadda sare ku dhawaaqday ayaa noqonaya marxalada ugu dambeysa ee dhegeysiga dacwada kala duwan, lamana cadeyn inay eedeysanaayasha Dilka lagu xukumay rafcaan qaateen iyo in kale.
Dhinaca kale sida ay warbaahinta dawladu sheegtay Weftiga Guddida Cadaaladda Somaliland ee uu hogaaminayo Guddoomiyaha maxkamadda Sare ee Somaliland, waxay kormeer shaqo ku soo mareen Goobaha Cadaaladda ee Gobolka Saaxil, halkaasoo ay warbixino kaga dhegeysteen Masuuliyiinta dawlada u qaabilsan.